अब नेपालमा निसानको नयाँ किक्स गाडी
नेपाल हालखबर ५ फाल्गुन २०७५
काठमाडांै.फागुन ६ गते । नेपालकालागिनिशान मोटर्सद्वारा उत्पादित गाडीहरुको आधिकारिक बिक्रेतापायोनियर मोटो कर्पप्रा.लि.ले लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको निसानको उत्कृष्ट गाडी किक्स फागुन ५ गतेदेखि बजारमाल्याएकोछ । किक्स गाडीले आफ्नाग्राहकहरुलाई विशेष सुविधा सहितआरामदायी सेवादिनेछ । यसको फराकिलो भित्रीभाग र स्टाइलिष्ट (आकर्षक) बाहिरी भागले ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्नेछ । अति राम्राविशेषतासहित सुरक्षाको हिसावले अब्बलमानिएको किक्स गाडी नेपालीबजारमाईन्टी लेभलको रु. ४७,९९,०००÷– मा र टप लेभलको रु. ५९,९९,०००÷– मा पाइनेछ ।
यसकाअन्यकतिपयविशेषता छन्, जसमा ८ इन्चको टचस्क्रिन जसलाई एन्ड्रोइड तथाएप्पल प्रणालीद्वारा सञ्चालनगर्न सकिन्छ साथै एलईडी प्रोजेक्टरको हेड ल्याम्प, अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल, कूल र इलुमिनेटेड ग्लोभ बक्स, क्रुज कन्ट्रोल,भ्वाइस रिकग्निसन, गाडी स्टाटकोलागि साँचो नचाहिने स्मार्ट कार्ड, चालकको लागि हाइट मिलाउनमिल्ने सिट, दुईवटा एयरब्याग र ईबीडी र बीए सहितको एबीएस समावेश गरिएकोछ ।
यो क्ग्ख्गाडी डिजेल ईन्जिनमाह्ी, ह्ख् र ह्ख्प्रिमियम गरी तीनप्रकारका र पेट्रोल ईन्जिनमाह्ी रह्ख्गरी दुईप्रकारकारहेका छन् । यसैगरी नयाँनिसानकिक्स पर्ल ह्वाइट, ब्लेड सिल्भर, ब्रोजन ग्रे फायर रेड, एम्बर अरेन्ज, जीप ब्लु पर्ल र नाइट सेड गरी जम्मा७प्रकारकाविभिन्नकलरमापाइनेछन् ।
बिक्री प्रारम्भ गरिएको समारोहमा,पायोनियर मोटो कर्पका प्रबन्ध निर्देशक
श्री सन्दीपकुमार सारदाले विश्वस्तरीय नयाँ सवारी साधन नेपालीउपभोक्तासंग ल्याउन सकेकोमाखुशीव्यक्तगर्नुभयो, जसले नेपालीको अभिरुचि पूरा गर्नेछ साथैयसबारे नेपालीहरुमा रहेको उत्सुकता पूरा गरेकोछ र हामीलाई विश्वास छ र कारप्रेमी नेपालीहरुको मन जित्नेछ ।
यसको स्टाइलिस डिजाइनले यसको क्षमता र ड्राइभिङ्ग डाइनामिक्सलाई परिपूरकको काम गरेकोछ । नयाँनिसानकिक्सको पेट्रोल इन्जिनमा १.५ज्द्धप्को ५ स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसन रडिजेल इन्जिनमा १.५प्ढप् म्ऋक्ष्को ६ स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसनमाउपलब्ध छन् ।
यसको माइलेज क्षमताउत्तममानिएकोछ । पेट्रोल इन्जिनले प्रतिलिटर १४.२३ किलोमिटर र डिजेल इन्जिनले प्रतिलिटर २०.४५ किलोमिटर गाडी चल्नसक्ने ब्च्ब्क्ष्ले प्रमाणित गरेकोछ ।
यी गाडीहरु पायोनियरको नयाँ बिक्री कक्ष काठमाण्डौं उत्तरढोका र देश भरका बिक्री केन्द्रहरुबाट खरिद गर्न पाइनेछ ।
पायनियर मोटो कर्प
पायनियर मोटो कर्पनिसानमोटर कम्पनीजापानको नेपालकालागिआधिकारिक बिक्रेताकम्पनीहो । यसले निसान र ड्याटसनका उत्पादन देशभर बिक्रीगर्दै आएकोछ । पायनियर कम्पनीसंग ललितपुरमा सर्भिस सेन्टर छ भने मुलुकभरमा १४ वटा डिलरहरुको सञ्जाल रहेकोछ ।
निसानमोटर इण्डिया लिमिटेड निसानमोटर कम्पनी लिमिटेड जापानको १ प्रतिशतको सब्सिडियरी कम्पनीहो । निसानजापानसंग यो सन् २००५ देखि आवद्ध रहँदै आएकोछ । यसले भारतमाएमयुभी, एसयुभी र सेडान सेग्मेन्टका गाडीहरुको उच्चस्तरीय रुपमानिर्माण गर्दै आएकोछ । निसानमोटर इण्डियाको चेन्नई नजिकमोटर बनाउने कारखानाका साथै रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट केन्द्र पनि रहेकोछ । यसको रिनोल्टसंग पनिअन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी रहेकोछ । भारतमानिसान र ड्याटसन गाडी बनाउने दायित्वयसले लिएकोछ ।
निसानमोटर कम्पनीजापानको विश्वप्रसिद्ध मोटर निर्माताकम्पनीहो र यसको विश्वव्यापी सञ्जाल छ । निसान, इन्फिनिटी र ड्याटसन ब्राण्डमा ६० भन्दा बढी प्रकारकामोटर यसले निर्माण गर्दछ । विश्वभरमा सन् २०१६ मायसले ५.६३ मिलियन सवारी साधनबिक्री गरेको थियो र ११.७२ ट्रिलियन यान राजस्वजम्मा गरेको थियो । सन् २०१७ देखि २०२२ सम्मको ६ वर्षे महत्वकांक्षी योजनाको निसानले घोषणा गरेकोछ । जसअनुसार ३० प्रतिशतले आम्दानी बढाउने लक्ष्यनिर्धारण गरिएकोछ । निसानले इलेक्ट्रिकल सवारी साधनबिक्रीमापनि अग्रणी स्थानबनाउने उद्देश्यका साथ रणनीति बनाएकोछ ।
निसानका योकोहामाको कार्यालयले ६ वटा रिजनको व्यवस्थापन हेर्दछ । जसमाएशिया एण्ड ओसियाना, अफ्रिका, मध्यपूर्व र इण्डिया, चीन, युरोप, ल्याटिन अमेरिका र नर्थ अमेरिका पर्दछन् । निसानसंग २ लाख ४७हजार ५ सय कामदारहरु छन् । फ्रेन्च कम्पनी रेनोल्टसंग सन् १९९९ देखि आवद्ध रहेकोछ । निसानले मित्सुविसीको ३४ प्रतिशत शेयर खरिद गरेपछि रिनोल्ट–निसान–मित्सुविसीमिलेर संसारकै ठूलो कम्पनीबनेकोछ । यसबाट सन् २०१७मा १०.६ मिलियन सवारी साधनबिक्रीगरियो ।
नेशनलएक्सचेन्ज र सम्सारा रेमिटबीच रेमिट्यान्स सम्झौता